JAV fan တှအေတှကျ တငျ့တယျတဲ့ရှရေငျအစုံ နဲ့ soft body ပိုငျရှငျ ? မွငျရသူတိုငျး လှုပျလှုပျရှားရှားဖွဈသှားစမေဲ့ Yurina Momose နဲ့မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျအိမျထောငျပွုတယျဆိုတာ ကံစမျးမဲနှိုကျရသလိုပါပဲ တဈခါတလကေရြငျ ကိုယျတှေးထားသလို ကိုယျထငျထားသလိုတှဖွေဈမလာတကျပါဘူးတို့တှအေိမျထောငျပွုပွီးရငျ ဘယျလိုနမေယျဆိုပွီး တှေးထငျ အစီအစဉျတှဆှေဲထားတာတှကေ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ ကမောကျကမတှေ ဖွဈသှားတကျပါတယျအခုလညျးကွညျ့လေ ယူအီနို တဈယောကျ လကျထပျပွီးရငျ ခဈြရတဲ့ သူနဲ့ နှဈဦးတညျး နရေတော့မယျဆိုပွီး အားခဲထားသမြှ သဲရကေခြဲ့ရပါပွီ
ယောက်ခမဆိုတဲ့ တံတိုငျးကွီးက သူတို့နှဦးရဲ့ ကွငျစဦး အရသာကို ခွားနားထားပွီလသေညျကွားထဲ သူမရဲ့ တငျးရငျးပွီး နုထှားနတေဲ့ ရှရေငျအစုံကို မကျြစောငျးခဲ နတောကိုလညျး မသိကြိုးကြှနျပွုနရေသေးတယျဒါအပွငျ သူမရဲ့အခွအေနကေ ညညျးငှစေ့ရာလညျးကောငျးနပွေနျတယျလငျဖွဈသူ က အခြိနျပွညျ့အလုပျလုပျနရေတယျ မနကျသှားပွီး ညကမြှပွနျလာတယျတဈနကေုနျအိမျမှာ နရေပွီး ယောက်ခမကို လိုလေးသေးမရှိအောငျ ပွုစုရတယျတဈနတေ့ဈနေ့ အဲသညျလိုပဲအခြိနျကုနျနခေဲ့ရတယျတဈနေ့ သူမ မြိုသိပျထားတာတှေ ပေါကျကှဲထှကျလာတော့ သူမ ဘယျလိုရငျဆိုငျမလဲသူမရဲအလှအပတှနေဲ့ ဘယျလိုကကွိုးတှဆေငျပွီး ဘယျလိုခုနျမှာလဲဆိုတာအနုအရှကွိုကျသူတှအေတှကျ သူမရဲ့ တုနျတုနျယငျယငျ Orgasm တှကေို ရငျတဖိုဖိုနဲ့ ကွညျ့ရစဖေို့ အခုပဲတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ(ကိမုခြိမှတငျဆကျပေးထားပါတယျ)
JAV fan တွေအတွက် တင့်တယ်တဲ့ရွှေရင်အစုံ နဲ့ soft body ပိုင်ရှင် ? မြင်ရသူတိုင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေမဲ့ Yurina Momose နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ကံစမ်းမဲနှိုက်ရသလိုပါပဲ တစ်ခါတလေကျရင် ကိုယ်တွေးထားသလို ကိုယ်ထင်ထားသလိုတွေဖြစ်မလာတက်ပါဘူးတို့တွေအိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် ဘယ်လိုနေမယ်ဆိုပြီး တွေးထင် အစီအစဉ်တွေဆွဲထားတာတွေက တကယ့်လက်တွေ့မှာ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်သွားတက်ပါတယ်အခုလည်းကြည့်လေ ယူအီနို တစ်ယောက် လက်ထပ်ပြီးရင် ချစ်ရတဲ့ သူနဲ့ နှစ်ဦးတည်း နေရတော့မယ်ဆိုပြီး အားခဲထားသမျှ သဲရေကျခဲ့ရပါပြီ
ယောက္ခမဆိုတဲ့ တံတိုင်းကြီးက သူတို့နှဦးရဲ့ ကြင်စဦး အရသာကို ခြားနားထားပြီလေသည်ကြားထဲ သူမရဲ့ တင်းရင်းပြီး နုထွားနေတဲ့ ရွှေရင်အစုံကို မျက်စောင်းခဲ နေတာကိုလည်း မသိကျိုးကျွန်ပြုနေရသေးတယ်ဒါအပြင် သူမရဲ့အခြေအနေက ညည်းငွေ့စရာလည်းကောင်းနေပြန်တယ်လင်ဖြစ်သူ က အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေရတယ် မနက်သွားပြီး ညကျမှပြန်လာတယ်တစ်နေကုန်အိမ်မှာ နေရပြီး ယောက္ခမကို လိုလေးသေးမရှိအောင် ပြုစုရတယ်တစ်နေ့တစ်နေ့ အဲသည်လိုပဲအချိန်ကုန်နေခဲ့ရတယ်တစ်နေ့ သူမ မျိုသိပ်ထားတာတွေ ပေါက်ကွဲထွက်လာတော့ သူမ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲသူမရဲအလှအပတွေနဲ့ ဘယ်လိုကကြိုးတွေဆင်ပြီး ဘယ်လိုခုန်မှာလဲဆိုတာအနုအရွကြိုက်သူတွေအတွက် သူမရဲ့ တုန်တုန်ယင်ယင် Orgasm တွေကို ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရစေဖို့ အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်(ကိမုချိမှတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်)
File size - 447MB
Link - https://1bit.space/WiDDPZv
Link - https://mkvlinks.xyz/WhrDzpq9
Link - https://uiz.io/nlk3